Isbeddellada xagaaga ee kabaha ragga jiilaalka 2020 | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Calzado, fashion
Sannadihii ugu dambeeyay waan arki karnaa taas isbeddelka kabaha ragga xoogaa wey is beddeleysaa. Waxa ugu caansan ayaa ah in ragga ay had iyo jeer doorteen kabo isboorti oo loogu talagalay raaxadooda iyo qaabkoodaba. Si kastaba ha noqotee, isbeddellada ugu dambeeyay maaha kaliya sharadka kabaha isboortiga, laakiin sidoo kale qaababka kale ee kabaha sida magaalooyinka ama "caadi". Fashionku wuu is badalayaa waxaana arki karnaa rag badan oo xiran kabo, kabaha canqowga ama xitaa kabo qaar oo loo tixgeliyey kuwa ka sii caansan muddo dheer.
Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa waxa ay yihiin isbeddelada ku dhaca kabaha ragga.
1 Isbeddellada xilliga kabaha ragga xilli ciyaareedka 2020
2 Kabaha xir
3 Isbeddellada kabaha ragga: rootida iyo kabaha
Isbeddellada xilliga kabaha ragga xilli ciyaareedka 2020
Xilligaan 2020 waa mid aad u awood badan marka loo eego kabaha ragga. Waan arki karnaa taas kabaha ayaa istaagaya gaar ahaan kuwa nooca magaalooyinka ah. Kuwani waa kabo horay loo soo xirtay 90-meeyadii. Kabahaas anqawga ah ee nooca Chelsea ah ayaa sidoo kale taagan oo ay weheliyaan tiro badan oo kabo ah oo markii hore loo tixgelin jiray kuwa ka sii caansan.
Silsiladaha qaarkood sida ZARA iyo H&M waxaad ku arki kartaa soo jeedinno xiiso leh oo loogu talagalay kabaha ragga sida kabaha canqowga ee suute oo ay ku jiraan jiinyeerro ama xargaha iyo kali khafiif ah. Qaybta kabaha ragga ee Shoesobi Dhammaan noocyada ugu caansan ee kabaha ragga ayaa la siiyaa. Waxaan kala dooran doonnaa inta udhaxeysa magaalooyinka, qaababka isboortiga iyo kuwa doonaya inay daryeelaan xarrago iyo raaxada cagahooda.
Midabka lebiska ayaa ah midka leh isbeddellada ugu badan xilligan 2020 kabaha noocan ah. Tani waa sababta oo ah waxaa si fudud laysugu dari karaa jooniska maqaarka ah iyo funaanad aad u weyn oo isku mid ah. Waxay sidoo kale isku daraan natiijooyin aad u wanaagsan haddii aad isticmaasho shaatiyadaha la jeexjeexay oo ay la socdaan saamaynta qaababka kale sida dharka isboortiga ama "ka weyn". Haddii aad rabto in cagahaagu ahaadaan qaabkii ugu dambeeyay, waa inaad falanqeeysaa qaar ka mid ah isbeddellada loo soo xirtay kuwa ugu badan ee ragga hadda jira. Sidan oo kale, waxaad sifiican u falanqeyn kartaa soo-jeedinta si faahfaahsan oo aad u kala dooran kartaa dhammaan moodooyinka la heli karo.
Waa inaad doorataa kabaha ragga ee adiga kugu habboon iyo qaabkaaga. Kaliya maaha inaad fiiriso xirashada dharka ugu dambeeya. Mid kastaaba wuxuu dejiyaa qaab u gaar ah. Naqshad cusub oo ka mid ah kabaha isboortiga ee Kanye West iyo Adidas ayaa ilkaha dhaadheer gelisay in ka badan hal. Waxay ku saabsan tahay tusaalaha Kabaha Yeezy. Kabo dhuumaaleysi oo qoyskiisu uusan joojin koritaanka. Qaabkani wuxuu awood u leeyahay inuu beddelo jihada bilicsanaanta maadaama uu leeyahay noocyo kala duwan iyo qaab isboorti. Waxaa laga heli karaa gebi ahaanba madow.
Kaniisadaha Masiixiyiinta kamay maqnayn qolka labiska moodel caadi ah oo kabo xidhan oo ka samaysan maqaar oo leh xargo. Waa kabo leh qaab aad u qurux badan oo loogu talagalay ragga la gaadhay taasna waxay noqotay isbeddel xilli ciyaareedkan. Waana inay si isku mid ah isugu darsamayso suud oo ay u noqotay kabo lama huraan u ah dhar kasta oo xarrago leh
Kaliya maahan inaan helno kabo xarrago leh, laakiin qaabkani aad buu u badan yahay oo si fiican buu kugu habboonaan doonaa haddii aad doorato moodooyinkaas leh suulasha soo ifbaxaya. Kuwa ugu badan ee istaagay waa nooca Blucher kuwaas oo god yar ku leh maqaarka iyo caarad wareegsan. Waa nooc ku habboon in lagu daro lebbiska, in kasta oo sidoo kale lagu xidhan karo jooniska ama chinos.
Waxaa jira kabo kale oo xiran oo iyaguna noqda isbeddel hadda socda. Waxay si aad ah diirada u saareen qaabka "caadiga ah" waxaana lagu dari karaa midabbo kale oo qurux badan sida bunni. Kabahaas Wax badan ayey ka saaraan maadaama ay ku xiran karaan qaab ah "retro"., taas oo hadda socota. Waxaan sidoo kale iibsan karnaa kabo xiran oo xirxiran halkii aan ka xiri lahaa xargaha. Kabahaas waxaa si fiican loogu dari karaa chinos, joonis iyo suud.
Waa inaad tixgelisaa midabada kabaha. Way cadahay taas midabada guuleysta waa bunni iyo madow. Midabadan ayaa ka adkaanaya inta hartay mana aha oo kaliya dejinta isbeddellada, laakiin sidoo kale waxay ku jiraan moodooyinka ugu fiican ee kabaha oo isku daraa ku habboon qaab kasta oo rasmi ah.
Ka mid ah isbeddellada ugu dambeeyay ee kabaha xiran ee xilligan jiilaalka ee 2020, waa inaan ka hadalnaa kabaha kuwa leh maro jilicsan oo ah dhar muhiim ah. Waa nooc ka mid ah kabaha oo leh qaab taariikhi ah oo leh naqshado casri ah. Qaar badan oo ka mid ah kabahaasi waa madow waxayna isku daraan si aad u wanaagsan si ay ugu xirtaan suud.
Waxaa jira kabo kale oo xiran oo leh faahfaahin maqaar dhejis ah si ay ula shaqeyso qaababka kale ee naqshadaha caadiga ah.
Isbeddellada kabaha ragga: rootida iyo kabaha
Loafers sidoo kale waxay ku jiraan moodada dharka ragga. Aad ayey u xiran yihiin haddii lagu daro qaabab sida "caadi ah" ama joonisyo iyo funaanad tolmo leh. Noocyada ugu casrisan ee moccasin-ka caadiga ah waa kuwa leh midabbo burgundy, cas ama buluug ah.
Waxay umuuqataa in mokcasins lagu soo bandhigo nooc kale oo maqaar ah, in kasta oo ay jiraan moodooyin badan oo la xiriira kabaha dhaqameed iyo midabbada sida madow oo aad markasta quruxsan doonto.
Sida kabaha, Waxay ahaayeen kabaha ku jira isbeddelka ragga ee lagu dhiirrigeliyey qaabka millateriga. Kabahaasi waxay u yimaadaan xoogaa kafilan oo midabbada qaarna waxay u dhexeeyaan madow illaa bunni. Kabahaasi waxay ku ciyaaraan qaab "denim" iyo moodo qaab "caadi ah". Dhammaan dadkaas doonaya inay xirtaan kabaha ugu sarreeya, wax dhib ah ma leh. Waxay u muuqataa in kabaha noocan ahi ay la socdaan nooc kuu oggolaanaya inaad hoos u dhigto markii loo baahdo. Thanks to this, waxaad isku dari kartaa moodel milatari leh jiinis ka dibna xirtaan mid ka adag oo ka gaaban.
Kuwani waa isbeddellada kabaha ragga ee xilliga qaboobaha 2020. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad si fiican ugu fahmi karto isbeddellada ku dhaca kabaha ragga.
I. Ma taageeri kartaa inaad ii sheegto nooca kabaha sawirka hore?